KASHIFAAD: Fahad Yaasiin Oo Dalka Iiraan Kusugan Hubna loo ballan qaaday | SMC
Home WARARKA MAANTA KASHIFAAD: Fahad Yaasiin Oo Dalka Iiraan Kusugan Hubna loo ballan qaaday
KASHIFAAD: Fahad Yaasiin Oo Dalka Iiraan Kusugan Hubna loo ballan qaaday
Laba sano kahor magaalada Muqdisho waxaa laga daad gureeyay dhallinyaro badan waxaana loo qaaday Dalka Eretariya, halkaas oo tababar uga socday labadii sano ee lasoo dhaafay,wallow at Dawlada beenisey in askar loogu tababaarayo Asmara.
Dhalinyaradaan oo xitaa loo diiday iney dhaq dhaqaaqyo sameeyaan ayaa loo tababaray qaab kaduwan kuwii ciidamadii horay loogu tababari jiray Dowladda Soomaaliya, iyadoo ciidankaan labaray kaliya sida Madaxweynaha talada haya loogu ilaaliyo Kursiga oo awood isticmaalaan.
Dhanka kale Taliyaha Nabad sugida Qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa kusugan Dalka Iiraan isagoo halkaas kasoo qaadi doona hubkii loo qeybin lahaa ciidamadan Kusugan Dalka Eretariya.
Askartaan oo loo badinayo iney dhowaan soo gaari doonaan Magaalada Muqdisho ayaa loogu talo galay in lagu cabburiyo dhammaan Musharrixiinta u taagan qabashada xilka Madaxweynaha Soomaaliya.
Ciidamadaan loo tababaray qaabka cusub ayaa ladoonayaa in lagu beddelo dhammaan ciidamada kahowl-gala gudaha magaalada Muqdisho.
Ujeeddada ugu weyn ayaa ah in Musharrixiinta la go’doomiyo oo loo diido la kulanka Dadka si aysan u helin fursad ay ku ololeeyaan ilaa laga gaarayo maalinta doorashada.
Warar kale ayaa sheegaya in ciidamadaan qeyb kamid ah loo gudbin doono Goballadda si iyana loogu hor istaago musharrixiinta aan Dowladdi taageersaneyn ee xildhibaan doonka ah.
Ugu dambeyn Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhowaan safar kutegay Magaalada Asmara ee Dalka Eretariya.
Safarkaas oon horay wax war ah looga heyn ayaa hadda la ogaaday iney khuseeysay arrinta ciidamadaan dhowaan kusoo wajahan magaalada Muqdisho mana jirto war arintaan kusaabsan oo Villa Soomaaliya ku beenisay.
Previous articleWafdi uu hoggaaminaayo Qoorqoor oo gaaray Guriceel
Next articleMD Farmaajo oo ka digay halis ka imaa karta hadii ciidamada Mareykanka laga saaro Somaliya